‘रुद्रप्रिया’ प्रतिक्षाका तीन कारणहरु « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
‘रुद्रप्रिया’ प्रतिक्षाका तीन कारणहरु
रेखा थापा आँफैले निर्माण गरेको चलचित्र ‘रुद्रप्रिया’ रिलीजको लागी अब दुई साता मात्रै बाँकी छ । लक्ष्मीपूजाको अवसर पारेर कात्तिक २ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने रुद्रप्रिया प्रतिक्षामा छ । यो चलचित्र प्रतिक्षामा रहनुका तीन कारणहरु यस्ता छन्:
फेरी रेखा-आर्यनको जोडी: एक समय रेखा थापा र आर्यन सिग्देलको जोडी दर्शकले रुचाएको जोडी हो । किस्मत, हिफाजत र कसले चोर्‍यो मेरो मन जस्ता चलचित्रमा रेखा र आर्यनको जोडीलाई दर्शकले रुचाएका थिए । दर्शकले रुचाएको यो जोडी झण्डै आठ वर्षपछि रुद्रप्रिया मार्फत फर्किएको छ ।
रेखाको भूमिका: चलचित्रको पोस्टरमा आधा अनुहार ढाकेकी रेखा प्रति कौतुहलता छ कि, उनको आधा अनुहार किन ढाकियो ? रेखाले कस्तो भूमिकामा अभिनय गरेकी छन् ? पछिल्ला चलचित्रमा लडाईँ गरिरहेकी देखिने रेखा यसमा किन मौन छिन् ? यो चासोको बिषय बनेको छ ।
निर्देशक: रुद्रप्रियाका निर्देशक सुदीपबबी भूपाल सिंह रेखा फिल्मसका लागि नयाँ हुन् । यसअघि माला फिल्म निर्देशन गरेका बबीले रुद्रप्रिया कस्तो बनाए होलान् त ? यो पनि अर्को चासोको बिषय हो ।